Nidaamka Pro-A wuxuu suurtagal ka dhigayaa gaar ahaan diyaarinta, tababar ama VAE, shahaado ka soo muuqaneysa liiska heshiis laan dheeri ah, oo lagu tixgelinayo astaamaha isbeddelka weyn ee howlaha iyo halista xirfado duugoobay.
Qeybta cuntada, kadibJanuary 21, 2020 heshiis (oo lagu daabacay Joornaalka Rasmiga ah ee Noofambar 14, 2020), OCAPIAT waxay ku siineysaa a hage is-dhexgal ah si aad u hesho dariiqaaga:
khariidadda cusub ee shahaadooyinka xirfadeed ee 208 ee u-qalma Pro-A. iyadoo loo eegayo 2 shuruudood: SHAQADA shirkadda (wax soo saar, dayactir, HR…) iyo SHAQADA ay fulisay shaqaaluhu.
Si aad wax badan uga ogaato Pro A, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad la tashato kuwayaga qaybta u dhiganta la xaashida soo bandhigida qalabka
OCAPIAT waxay ku fududeeysaa Pro A horumarinta xirfadeed iyo kobcinta xirfadaha shaqaalaha ee qaybta cuntada! July 10th, 2021Tranquillus
socdaSoo bandhigida qandaraaska xirfadeed ee tijaabada ee Loiret